သင်၏ Android ကို Launcher7ဖြင့် ၀ င်းဒိုးဖုန်းနံပါတ်မည်သို့ပုံဖော်မည်နည်း Androidsis
နောက်ဆောင်းပါးမှာမင်းကိုဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေး ဦး မှာပါ အခမဲ့ app များကို ဒါကအစေခံပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်၏အသွင်အပြင်ကိုလုံးဝပြုပြင်မွမ်းမံပါအခြားသူများကပုံနဲ့တူတယ် operating system မြား လက်ရှိနည်းပညာစျေးကွက်၏။
ဒီတစ်ခါတော့မင်းကိုမိတ်ဆက်တော့မယ် launcher 7, un launcher ၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိပြီးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနေဖြင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအား၎င်း၏ရရှိနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးဖြင့်ပေးချေသည်။ ၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့ကဖန်တီးထားသော operating system ၏အသွင်အပြင်အားလုံးကိုပေးနိုင်သည်။ Microsoft က စမတ်ဖုန်းများအတွက် က Windows Phone.
launcher7၎င်းသည် application launcher တစ်ခုသို့မဟုတ်အစားထိုးတစ်ခုဖြစ်သည် ပင်မစာမျက်နှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်း အန်းဒရွိုက် Windows Phone တစ်လုံးရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပေးမယ်။
launcher7၎င်းတွင်ဗားရှင်းပါရှိသော Android operating system ပါရှိသည့် terminal အားလုံးကိုအထောက်အပံ့ပေးထားသည် ၉.၀ နှင့်အထက်၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
Desktop widget များကိုတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း။
အလွန်အမင်း configurable ။
၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနီးပါးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော settings menu ရှိသည်။
အရောင်များသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အရောင်များအကြားရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ခြင်း, ပူးတွဲသို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခံရဖို့ Grid အရောင်များ။
Applications ကိုစာရင်းသို့မဟုတ်ဇယားကွက် mode မှာ။
App drawer ထဲမှ app တစ်ခုကို uninstall လုပ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။
Portrait mode နှင့် Landscape mode အတွက်ကွဲပြားသော icon များ၊ widget များနှင့်ဖြတ်လမ်းများပါသည့်ဖန်သားပြင်နှစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
ဤရွေ့ကား၏ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အများအပြားဝိသေသလက္ခဏာများအချို့ရှိပါတယ် launcher 7ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system ကို operating system ဖြင့်အသွင်ပြောင်းလဲရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက် ထိုသို့အသစ်သော၏စတိုင်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးပါ က Windows Phone de Microsoft ကနှင့်ဤအရာအားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးသောမိုဘိုင်း operating system ၏အားသာချက်များကိုအရှုံးမပေးဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အထင်ကြီးစရာကောင်းသည် အန်းဒရွိုက်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - MIUI V4 ၏ကိုယ်ပိုင် MiHome Launcher သည်ကိရိယာအားလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်, Omega StatusBar၊ သင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ task bar
ဒေါင်းလုပ် - Launcher7ကိုအခမဲ့၊ Launcher7မှလှူဒါန်းသောဗားရှင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » သင်၏ Android ကို Launcher7ဖြင့် ၀ င်းဒိုးဖုန်းနံပါတ်မည်သို့ပုံဖော်မည်နည်း
Manuel Sanchez ဆန်းချက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
Manuel Sanchez Sanchez အားပြန်ပြောပါ
04/09/2012 18:45 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ဟီချီကို၊ ငါဒီ launcher ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။ ငါဟာ Hotmail ကိုသူ့ရဲ့ counter နဲ့ configure လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိလဲ၊ ဘယ်လိုနှင့်မည်သည့် application ကိုသုံးရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ilitchvilla@hotmail.com